Big City Small World (Series3Episode3- The Boys Talk) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on July 18, 2013 at 13:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode3- The Boys Talk (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၃) ယောက်ျားလေးများစကားဝိုင်း)
The boys at the café are talking about girls and Harry reveals an exciting decision! What is it?
ကော်ဖီဆိုင်တွင် ယောက်ျားလေးများက မိန်းကလေးများအကြောင်း ပြောနေကြသည်။ ဟယ်ရီက စိတ်လှုပ်ရှားစရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖွင့်ဟလာသည်။
Series3Episode3- The Boys Talk ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Johnny: Hey, guys! Did you hear about Magda?
Johnny: She wonaprize for her architecture!
Johnny: ... but it turned out she’d only designed the door handles for the winning building!
ဒါပေမယ့် ဆုရအဆောက်အအုံမှာ သူက တံခါးလက်ကိုင်ပဲဒီဇိုင်းဆွဲရတာတဲ့ကွ။
Harry: Ha ha ha! Yeah, but c’mon, that’s not funny. She’s really talented! It’sagreat place to start.
ဟား ဟား ဟား။ အဲ လုပ်စမ်းပါကွာ ဒါဟာသမဟုတ်ဘူး။ သူတကယ်ထူးချွန်တာပါ။ ဒါတက်လမ်းအစပေါ့။
Johnny: What? Do you fancy her or something?
ဘာလဲကွ။ မင်းသူ့ကိုခိုက်နေတာလား ဘာလား။
Harry: No! Get out of here! I’m just being nice.
မဟုတ်ပါဘူးကွာ သွားစမ်းပါ။ ငါကသက်သက်ဖြည့်ပြောတာပါ။
Fadi: Yeah, Johnny, come on ...
Johnny: Guys! I’m only joking – good on her, really! Talking of girlfriends ...
ဟေ့ကောင်တွေ ငါက သက်သက် စနေတာပါ။ သူ့အတွက်တကယ်ကောင်းတာပေါ့။ ရည်းစားတွေအကြောင်းပြောတော့ . . .
Johnny: I hear you’ve been going out with Olivia, Fadi!
Fadi: OK, yeah, just once or twice, though. She’s really nice.
အိုကေ အေး တစ်ခါနှစ်ခါတည်းပါကွာ။ သူကကောင်းပါတယ်။
Harry: Are you going to see her again?
Fadi: Probably – she’s in this café every day!
တွေ့ရင်လဲတွေ့မှာပေါ့။ သူဒီကော်ဖီဆိုင်မှာ နေ့တိုင်းရှိတာပဲ။
Harry: You know what I mean! Are you going to go out with her again?
ငါဆိုလိုချင်တာသိတယ်မလား။ သူနဲ့ထပ်ပြီး အပြင်ထွက်လည်ဦးမှာလား။
Fadi: Oh ... I don’t know ... maybe ... Anyway – let’s change the subject: what about you and Bindyu?
အိုး . . . ငါမသိဘူး။ ဟုတ်မှာပေါ့ . . . ဘာပဲပြောပြော ခေါင်းစဉ်ပြောင်းကြပါစို့ကွာ။
Harry: Yeah. It’s good, y’know, we’re really different as people, but we get on pretty well actually.
အေး ကောင်းတယ်။ မင်းသိလား တို့တွေဟာ လူချင်းကတော့မတူကြပေမယ့် တော်တော်အဆင်ပြေကြတယ်ကွ။
Carlos: Hello there, guys! Only you lot today?
ဟယ်လိုသူငယ်ချင်းတို့။ ဒီနေ့ မင်းတို့ချည်းပဲလား . . .
Johnny: Looks like it. Don’t know where all the girls are today ...
ဒီလိုပုံထင်ရတာပဲ။ ကောင်မလေးတွေဒီနေ့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး . . .
Fadi: Gone shopping, probably.
Carlos: I think those girls have more interests than just shopping. They’reapretty intelligent bunch of people!
သူတို့ ဈေးဝယ်သက်သက်ထက်ပိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ တော်တော်လေးဥာဏ်ကောင်းတဲ့အုပ်စုပဲ။
Harry: That’s true actually. They’re all more successful than we are!
ဒါတော့အမှန်ပဲ။ သူတို့အားလုံး ငါတို့ထက်ပိုအောင်မြင်တယ်။
Johnny: Hey! Speak for yourself! I’m very successful!
ဟေ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောစမ်းပါကွာ။ ငါကအရမ်းအောင်မြင်တယ်ကွ။
Harry: In that case, Johnny – you should buy us allacoffee!
ဒါဆိုရင်တော့ ဂျော်နီ မင်းငါတို့အားလုံးကို ကော်ဖီတိုက်သင့်တယ်။
Johnny: OK, then! Tony –acappuccino for everyone, please!
ကောင်းပြီလေ။ တိုနီရေ အားလုံးအတွက် ကာပူချီနိုတစ်ခွက်စီ လုပ်ပါဦး။
Tony: All right, all right ...
အေး . . . အေး . . .
Harry: So, Carlos, we were just talking about girlfriends.
ကဲကားလို့စ် ငါတို့ ရည်းစားကောင်မလေးတွေအကြောင်းပြောနေကြတာ။
Fadi: Wait, Harry – you were talking about girlfriends.
နေဦး ဟယ်ရီ။ မင်းပြောနေတာ။
Harry. Whatever! Have you seen Sarah again, Carlos?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ ဆာရာနဲ့ထပ်တွေ့သေးလား ကားလိုစ့်။
Carlos: Yeah. It was difficult at first – we’re quite different people.
အေး အစပိုင်းတော့ ခက်တာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူမှမတူကြတာ။
Harry: Tell me about it ...!
Carlos: But we both like cinema, and cooking – so we go out to seeamovie, then go and get something to eat somewhere. It’s good.
တို့နှစ်ယောက်လုံးက ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ထမင်းဟင်းချက်တာဝါသနာပါကြတယ်။ ဒီတော့ ရုပ်ရှင်ထွက်ကြည့်ကြ၊ တစ်ခုခုထွက်ဝယ်ထွက်စားကြနဲ့ပေါ့။ ကောင်းပါတယ်။
Harry: Nothing more?
Carlos: Well, no ... I’m taking it slowly. I’mabit fed up with my job here, y’know, thinking about maybe giving it up and going back to Brazil.
အဲ ဟင့်အင်း။ ငါဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတာ။ ဒီကအလုပ်ကိုငါနည်းနည်းစိတ်ကုန်နေတာ မင်းလဲသိသားပဲ။ ဒါကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ဘရာဇီးပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတယ်။
Fadi: Really? Wow, well, we’d be sorry to see you go!
တကယ်လား။ အင်း ဒီလိုဆိုတော့ မင်းသွားရင်ငါတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရဦးမှာပေါ့။
Harry: Yeah – we’d miss you!
အေး . . . မင်းကိုငါတို့သတိရနေဦးမှာပဲ။
Carlos: What about you and Bindyu, Harry?
မင်းတို့အကြောင်းရော ဘင်ယု၊ ဟယ်ရီ။
Harry: Well, I was just telling the guys, we’re getting on really well. I’m even ... I mean ... I’ve thought about ...
အင်း ငါအခုပဲဒီကောင်တွေကိုပြောနေတာ ငါတို့တကယ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ငါ . . . စဉ်းတောင်စဉ်းစားနေတာ. . .
Harry: Asking her to marry me!
Harry: Well, only, y’know, like ... maybe ... justathought ...
ဒီလိုလေ . . . မင်းတို့သိတယ်မလား . . . ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ တွေးကြည့်တာပါ။
Johnny: Blimey – Tony – I think we’ll need those coffees extra strong!
ဘုရားရေ။ တိုနီရေ ငါတို့ကော်ဖီကို ပိုပြင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Permalink Reply by Sulayee on July 25, 2013 at 12:10
Permalink Reply by Hnin Nway Naing on July 27, 2013 at 16:54
Permalink Reply by lin zar zar nwe on July 28, 2013 at 9:41
Thanksalot,really helpful :)
Permalink Reply by Soe Soe on July 28, 2013 at 18:14
Permalink Reply by sweetysuthae on August 7, 2013 at 11:06